La Falconiera, ipulazi elidala, 6 kuya ku-13 p - I-Airbnb
La Falconiera, ipulazi elidala, 6 kuya ku-13 p
ILa Falconeria iyipulazi elidala (1750), elise-71 Strada Falconiera ngemuva kwegama lepulazi. Kuqhele ngamakhilomitha amathathu ukusuka e-Acquapendente, isiteji esise-Via Francigena.
I-Acquapendente itholakala e-Via Cassa, Kuyidolobhana eliphilayo futhi elamukelayo elinezakhamuzi ezingu-5000, elinemakethe yamasonto onke ngoLwesihlanu kanye nezitolo eziningi ezithengisa imikhiqizo yasendaweni. Ngesikhathi sasehlobo zonke izinhlobo zama-fêtes zenzeka endaweni ezungezile.
Esitezi esiphansi indlu inegumbi lokuhlala elikhulu elingu-60 m², elinetafula labantu abangu-12 kanye nendawo yokuhlala phambi kweziko. Eduze kwaleli gumbi kukhona ikhishi, ikamelo lokulala elinombhede wabantu ababili kanye neshawa.
Esitezi sokuqala, amagumbi amabili okulala, igumbi lokugezela negumbi lokugeza kanye negumbi lokuhlala elikhulu elingu-40 m² lingasetshenziswa. Imibhede yezingane ezimbili ingaqedela izindawo zokulala kanye namakamelo amabili ahlotshiswe kabusha ngokwengxenye.
I-La Falconiera iseduze nezindawo Zokulondolozwa Kwemvelo ezintathu: i-Monte Rufeno, i-Monte Amiata ne-Bolsena Lake. Kule ndawo umuntu angathola amadolobha obuciko abaluleke kakhulu e-Central Italy: isibonelo, indlu iqhele ngamakhilomitha angu-30 ukusuka e-Orvieto (Umbria, isiteshi sesitimela), amakhilomitha angu-50 ukusuka ePienza, eMontepulciano nase-Etruscan necropolis yaseSovana; ihora ukusuka eSiena nasogwini lolwandle (Argentario).
Engadini, izihlahla zikaphayini, imisedari nezihlahla zomnqumo zivamile kule ngxenye yeLatium ehlangene neTuscany ne-Umbria.
Kulabo abathanda ezemidlalo, ake sibalule ubukhona bezinkundla zethenisi e-Acquapendente. Kungenzeka futhi ukuhamba kahle kanye nokuvakasha kwamabhayisikili noma ukugibela amahhashi (kuneklabhu yokugibela encane eduzane). Ngaphezu kwalokho ukuhamba ngomkhumbi kuyatholakala e-Bolsena Lake. Ukuphumuza okugeza okushisayo kweSan Casciano kuqhele ngamakhilomitha ayi-18 kuphela.
Ipulazi latholwa ngo-1974 ngogogo nomkhulu futhi lalungiswa kancane kancane ngenkathi kuhlonishwa isakhiwo esidala. Usasetshenziswa umndeni ehlobo nangesikhathi sokuvunwa komnqumo ekwindla.
I-Bolsena Lake 15 km (10 miles)
I-Argentario 100 km (62 miles)
Isikhumulo sezindiza saseRome Fiumicino 130 km (80 miles)
I-Viterbe 50 km (31 miles)
I-Sovana 30 km (18 miles)
I-Orvieto 32 km (19 miles)